Midori Nchọgharị: A free, oghe, ìhè, ngwa ngwa na ala nchọgharị na weebụ | Site na Linux
Malite na ọnwa nke February anyị ga-amalite site na ngwa nke obere ekwuola na oge na Blog anyị. A na-akpọ ya "Midori Nchọgharị", na ihu ọma na ọ bụ ihe ọzọ na bara uru Nchọgharị weebụ nke a mụrụ n'ebumnuche nke ịbụ ìhè, ngwa ngwa, nchebe, free software na-emeghe iyi, dị ka ya mmepe.
"Midori Nchọgharị" bụ maka ugbu a, ngwaahịa na-akwụghị ụgwọ ma mepere emepe nke otu nzukọ akpọrọ «Iantù Astian» nke n'aka nke ya bu nke a Ntọala nke otu aha (Astian), nke bụ otu ìgwè nke nzukọ raara nye mmepe nke ngwanrọ na teknụzụ na-enweghị ihe ọ bụla na ntinye nke ọrụ na-akwalite ma na-akwado mkpokọta nzuzo na njikwa ozi.
Tupu m malie ozugbo na "Midori Nchọgharị" Ọ dị mma ichetara gị na n'ime weebụsaịtị anyị anyị nwere ọtụtụ ntinye na ihe nchọgharị dị iche iche na nsụgharị dị iche iche, nke anyị na-akwado ịchọ na ịgụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, nke ikpeazụ kwuru bụ Akụkụ, nke anyị na-akọwa dị ka ndị a:
"Sidekick bụ usoro mgbanwe nke na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke na-adabere na ihe nchọgharị Chromium. Ezubere ka ọ bụrụ ahụmịhe ọrụ kachasị n'ịntanetị, ọ na-eweta ndị otu gị na ngwa ọrụ weebụ ọ bụla ị na-eji ọnụ niile n'otu interface." Sidekick: Ihe nchọgharị weebụ maka ahụmịhe ọrụ ntanetị ka mma
Na mgbakwunye, ha nwere ike inyocha ọtụtụ n'ime ha ozugbo ukara weebụsaịtị, na-eji ndepụta ndị a n'okpuru:
0.1 Ihe nchọgharị weebụ
1 Midori Nchọgharị: Ihe Nchọgharị Weebụ Ọzọ
1.1 Kedu ihe Nchọgharị Midori?
1.3 Ihe mmepe na ọrụ ndị metụtara ya na nke emeghe na Midori
Midori Nchọgharị: Ihe Nchọgharị Weebụ Ọzọ
Kedu ihe Nchọgharị Midori?
Dị ka ndị mmepe ya si dị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, a kọwara ya dị ka ndị a:
"Midori Nchọgharị bụ ihe nchọgharị na a mụrụ na ebumnuche nke ịbụ ìhè, ngwa ngwa, ala, free software & oghe isi. Nke ahụ na-asọpụrụ nzuzo nke ndị ọrụ site na ịghara ịnakọta ozi ma ọ bụ na-ere mgbasa ozi na-emerụ ahụ, ị ​​ga-enwe njikwa nke data gị mgbe niile, enweghị aha, nzuzo na nchekwa".
Ugbu a na ya ukara website ọ na-aga site na nkwụsi ike mbipute 1.1.4 maka Linux na ndị instal ".Deb usoro" y «Formatdị AppImage». Agbanyeghị, enwere ike itinye ya na ihe ọ bụla GNU / Linux Distros site na ntinye ego gi na iwu iwu di mfe:
Ma ọ bụrụ na ibudata ya, dị ka ndị a:
N'okwu m, gịnị ka m ga-eji Linux MX, mbipute dị na arụnyere bụ nọmba mbipute 7.0.2.
N'etiti gị isi atụmatụ na arụmọrụ anyị nwere ike ịsị:
Otutu nyiwe: O nwere ikike ịgba ọsọ na ngwaọrụ desktọọpụ ọ bụla yana ama gam akporo, dịka ọ na-abịa na Installers maka Linux, Windows, MacOS na gam akporo.
Nzuzo na Enweghị Nzuzo: Na-asọpụrụ nzuzo nke ndị ọrụ, ebe ọ bụ na ndị mmepe ya «(Otu Astian)» Ha na-ekwe nkwa na ha agaghị azụ ahịa gbasara ozi ha, ha na-ekwekwa nkwa na ha agaghị ere mgbasa ozi na-emebi emebi ma ọ bụ ndị ọrụ profaịlụ. Ọzọkwa, Midori Browser na-eji DuckDuckGO nyocha ihe ndabara site na ndabara maka inwekwu nzuzo.
Mmekọrịta na Nchekwa na Igwe ojii: Ọ nwere njikọta ya na ọrụ nke ndị mmepe nke aka ya iji mekọrịta mmekọrịta nke data njirimara niile, ya bụ, ozi, akụkọ ihe mere eme, ibe edokọbara, okwuntughe na ọtụtụ ndị ọzọ, na-eji nzobe ihe njedebe.
Akwa Obodo: Ugbu a nwere nnukwu obodo nke, dị ka ọrụ ndị ọzọ SL / CA, dị njikere inyere anyị aka ma soro na-ekere òkè na mmepe nke ọrụ ahụ, na-etinye atụmatụ ọhụrụ, na-edozi nsogbu na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ihe mmepe na ọrụ ndị metụtara ya na nke emeghe na Midori
Maka ugbu a, ndị mmepe nke Midori enye ihe na-akpali ọrụ ntụgharị asụsụ n'ịntanetị (onye ntụgharị), emeghe oghere, nke nwere ntụgharị akpaka na ọtụtụ asụsụ, nke anyị nwere ike ịnụ ụtọ site na ịpị ndị a njikọ.
N'oge na-adịghị anya, ha ga-ebupụta otu Usoro njikwa, nke anyị chere ga-enwere n'efu ma meghee, dabere na ya GNU / Linuxakpọ Ndị Astrian.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Midori Browser», ihe ozo ma bara uru Nchọgharị weebụ nke a mụrụ n'ebumnuche nke ịbụ ìhè, ngwa ngwa, nchebe, sọftụwia na usoro ihe eji eme ihe; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Midori Nchọgharị: A free, oghe, ìhè, ngwa ngwa na ala nchọgharị na weebụ
Agbalịrị m ya ma ọ bụ eziokwu na ọ dị ọkụ mana enweghị m mmasị na interface ya kachasị metụtara taabụ na ụzọ iji jikwaa ha, anaghị m ahụ ya ngwa ngwa na weebụ, mana hey nke ahụ bụ uche m, onye ọ bụla amasị ya mgbe ahụ iji ya n'enweghị nsogbu, ekele
Ekele, Octavio! Daalụ maka okwu gị wee hapụ anyị ahụmịhe gị na Midori.